Kitra Afrikanina: ny Kaizers Chiefs no miandry ny Elgeco Plus | NewsMada
Kitra Afrikanina: ny Kaizers Chiefs no miandry ny Elgeco Plus
Ny ekipan’i Afrika Atsimo indray no miandry ny Elgeco Plus, amin’ny lalao ampaha-valondalana, fifaninanana afrikanina, taranja baolina kitra, taorian’ny fandresena azony nanoloana ny ekipan’ny Ginea Ekatoraly.
Ny 14 desambra izao indray no hiakatra an-kianja ny Elgeco Plus ka ny ekipan’ny Kaizers Chiefs avy any Afrika Atsimo no hifanandrina aminy. Lalao mandroso, savaranonando, io hatrehan’ny ekipa malagasy io, hotontosaina any Afrika Atsimo. Ny faha-21 ny volana desambra kosa ny lalao miverina izay hatao eto Madagasikara.
Raha tsiahivina, nolavoin’ny Deportivo Undidad tamin’ny isa 2 no ho 1 ny Elgeco Plus, ny alarobia lasa teo, nandritra ny lalao miverina, tany Ginea Ekatoraly. Tafakatra amin’ny dingana manaraka ihany anefa ny ekipa malagasy, rehefa natao ny tambatr’isa ka nanome, 4 no ho 3.
Mbola ady goavana ity hatrehina afaka tapa-bolana ity ka ilaina fahavononana avy amin’ny mpilalao tsirairay, raha ny fanazavana nentin’ireo mpilalao. Mila maka lesona ihany koa manoloana ny faharesena tamin’ny Ginea Ekatoraly iny, indrindra amin’ny fanaovana tandrevaka eny ambony kianja, raha ny fanazavana hatrany.